Rallye Air Australie Lehibe 2021
Bluegrass sy WestWind Airlines dia mihazakazaka ny hetsika isan-taona faha-20 Great Australian Air Rally amin'ny volana martsa.
Ny rally dia misy tongotra 10 isan'andro. Ny fampahalalana momba ny sidina dia hatao ho an'ny FS2004 , FSX , p3d ary X-Plane . Ny antsipirian'ny sidina sy ny toetr'andro dia omena ka izay manana simulator hafa dia afaka manamboatra ny drafitra fiaramanidiny manokana.
Hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny 1 martsa hatramin'ny 30 martsa ny fihetsiketsehana.
Azonao atao ny misafidy ny fiaramanidina propeller driven anao izay nanana sidina voalohany talohan'ny 1996, raha tsy izany, Freeware na payware mifanaraka amin'ny simulator anao.
Ny hazakazaka dia tsy hazakazaka, ny mpandray anjara tsirairay dia asaina mameno sidina fitsapana tsotra amin'ny hafainganam-pandehan'izy ireo amin'ny sidina voafantina. Ny isa tsirairay avy dia hikajiana amin'ny maha-marina ny fotoana kendrena mifanaraka amin'ny isaky ny fidirana.
Navoaka izao ny drafitra sidina sy ny fampahalalana momba ny sidina ho an'ny fihetsiketsehana. Io dia hamela fotoana hisafidianana fiaramanidina ary hampihatra ny fotoana sidina fitsapana handefasana amin'ny antsipirian'ny fisoratana anarana.
Raha mila vaovao farany, tsidiho ny fampahalalana bebe kokoa sy ny fanontaniana www.bluegrassairlines.com ary kitiho ny rohy GAAR.
Navoaka: 20 Febroary 2021